Smartphone Photography → 1.စမတ်ဖုန်းရဲ့Camera ကဓာတ်ပုံအလန်းလေးတွေထွက်တယ် ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီလို အနုပညာဆန်တဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ မှတ်သားစရာအချက်အလက်တွေကို လက်တွေ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ - Myanmar BOC
Home / Photography and Designs / Smartphone Photography
Smartphone Camera ကိုအသုံးပြုပြီး ပိုမိုကောင်း မွန်သော ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးနိင်ပါသည်။ Total Time - 3Hr (လေ့လာရတာ အဆင်ပြေရင် Review ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်........) 0/24
1.စမတ်ဖုန်းရဲ့Camera ကဓာတ်ပုံအလန်းလေးတွေထွက်တယ် ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီလို အနုပညာဆန်တဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ မှတ်သားစရာအချက်အလက်တွေကို လက်တွေ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ 03 min Preview
2.ဓာတ်ပုံကောင်းရဖို့ဖုန်းထဲမှာပဲ ဘယ်လိုမျိုး Edit လုပ်ကြမလဲ? 07 min Preview
3.ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုများ 04 min Preview
4.Panning Photography ဓာတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်မလဲ၊ 02 min
5.သိထားသင့်တဲ့ဓာတ်ပုံ Composition 03 min
6.Portrait Photography ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင် 04 min
7.Instagram စတိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြမယ် 05 min
8.အလန်းစား Selfie ပုံလေးတွေရဖို့ ဘယ်လို angle မျိုးကနေရိုက်မလဲ camera setting ကိုဘယ်လိုကစားမလဲ 08 min
9.အဖြူအမဲ ဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်မလဲ? 06 min
10.Hyperlapse (Time-lapse) mode အသုံးပြုပြီး အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးပုံဖော်နည်း 08 min
11.Smartphone တစ်လုံးနဲ့ Light Trail ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့ Camera Setting ချိန်ညှိပုံအသေးစိတ် 06 min
12.ခရီးထွက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေသိထားရမလဲ? 08 min
13. low light portrait အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်နည်း 06 min
14.Lowlight Portraitပုံတွေကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်မယ် 13 min
15. ခရီးထွက်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို Gadgets တွေယူဆောင်သွားသင့်လဲ? 07 min
16.မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံအတွက် ဘာတွေသိထားရမလဲ 10 min
17. ရေအောက်ဓာတ်ပုံအလန်းတွေကို ဘယ်လိုရိုက်မလဲ? 08 min
18. အစားအသောက်ဓါတ်ပုံကောင်း တစ်ပုံရဖို့ Positionဘယ်လိုရွေးမလဲ 10 min
19.စမတ်ဖုန်း ကင်မရာနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ DIY ဆက်စပ်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရိုက်ကူးမလဲ? 09 min
20.ဖုန်းနဲ့ Light Painting ဓာတ်ပုံရိုက်နည်း 06 min
21.creative ဆန်တဲ့ reflection ဓာတ်ပုံလေးတွေဖန်တီးဖို့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ tips and tricks များ… 09 min
22.Subject သေးသေးလေးတွေကို လှလှလေးဖြစ်လာအောင် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဓါတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ? 08 min
23.SmartPhone မှာပါတဲ့ features အလန်းတွေနဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်းပြီး professional ဆန်ဆန်ဓာတ်ပုံတွေ ဘယ်လိုရိုက်လို့ရလဲ… 07 min
24.စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလန်းစားဓာတ်ဖမ်းချင်သူတွေအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် Tips and Tricks လေးများ 09 min
1.စမတ်ဖုန်းရဲ့Camera ကဓာတ်ပုံအလန်းလေးတွေထွက်တယ် ဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီလို အနုပညာဆန်တဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ မှတ်သားစရာအချက်အလက်တွေကို လက်တွေ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Next 2.ဓာတ်ပုံကောင်းရဖို့ဖုန်းထဲမှာပဲ ဘယ်လိုမျိုး Edit လုပ်ကြမလဲ?